प्रचण्डको सुर’क्षामा खटि’यो पुर्वजनमुक्ति से’ना ; कसले गर्दैछ ने\_तृत्व? – Sadhaiko Khabar
प्रचण्डको सुर’क्षामा खटि’यो पुर्वजनमुक्ति से’ना ; कसले गर्दैछ ने\_तृत्व?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, फाल्गुण ०६, २०७७ समय: १४:१५:११
पूर्वज’नमुक्ति सेनाको टोली ख’टिन थालेका छन् । सरकारले प्रचण्ड-नेपाल नेतृत्वको नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुर’क्षामा भा’री कटौ ती गरेको हो । सरकारले पूर्वप्र’धानमन्त्रीहरुको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै प्रचण्डको सुरक्षा रहेकाहरुको पनि भारी क’टौती गरेको हो ।
हाल दुई जना नेपाल प्रह’रीका र करिब १३ जना सश’स्त्र प्रह’रीका टोली मात्र छन् । यसअघि प्रचण्डको सुरक्षामा नेपाल प्र’हरीबाट डीएसपीको कमान्डमा २६ जना र स’शस्त्रबाट इन्स्पे’क्टरको कमान्डमा ४७ जना गरी ७३ सुर’क्षाकर्मी खटिएका थिए । उनको सुर’क्षामा खटेका ख’टिएका सुरक्षा’कर्मीहरूको भारी कटौतीसँगै उनको सुर’क्षामा पूर्वज’नमुक्ति से’नाको टोली ख’टिएको छ।
सुर’क्षा चुनौतीलाई ध्यान दिएर पूर्वजन’मुक्ति सेनाको टोली खटाइ’एको प्रचण्ड-नेपाल समूहका राष्ट्रिय युवा संघ अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले पुष्टि गरेका छन् । उनले युवा संघका नेताहरु प्रचण्डको सु’रक्षामा खटा’एको बताएका छन् । उनीहरु पूर्वज’नमुक्ति सेनाको सदस्य रहेको दीपशिखाको भनाई छ ।
‘हामीले युवा संघका साथीहरू ख’टाएका छौं। उहाँहरू सबै पूर्वज’नमुक्ति सेनाका सदस्यहरू हो। उहाँहरूले सुर’क्षाका लागि सहजी’करण गर्ने मात्रै हो,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले मित’व्ययिताका लागि भन्दा पनि ‘बदला’ लिने नियतले सुर’क्षा टोली कटौ’ती गर्नुभएको हो। अब कसरी अघि बढ्ने भनेर हामी थप छलफल गर्दैछौं।’
दीपशिखाका अनुसार प्रचण्डको सुर’क्षामा पूर्वजन’मुक्ति सेना नेपालका बटालियन कमाण्डर प्रकाश पाण्डे (प्रलोक) को नेतृत्वमा १० जनाको टोली खटा’इएको छ । प्रचण्डलाई अहिले पनि सुरक्षा चुनौती भएका कारण पूर्वज’नमुक्ति सेनाका सदस्यहरुलाई उनको सुरक्षामा खा’टाएको बताइएको छ । दीपशिखाका अनुसार प्रचण्डको सुर’क्षामा पूर्व’जनमुक्ति सेना नेपालका बटालि’यन कमा’ण्डर प्रकाश पाण्डे (प्रलोक) को ने’तृत्वमा १० जनाको टोली खटा’इएको छ ।
शान्ति प्रक्रियामा आएदेखि नै ‘प्रलोक’ प्रच’ण्डको सुर’क्षा टोलीमा थिए। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएपछि उनी शक्ति’खोरस्थित तत्कालीन जनमुक्ति सेना’को तेस्रो डिभिजनमा थिए। सेना समा’योजनमा स्वेच्छिक अव’काश रोजेका उनी वाइसीएलमा थिए। नेकपा ग’ठन भएपछि उनी राष्ट्रिय युवा संघमा आ’वद्ध छन्।